Sawiro: Xaflad aad u balaadhan oo ahayd Fundraising ayey Golaha Ardaydii iskuulka 26ka Juun ku qabteen Magaalada London | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Sawiro: Xaflad aad u balaadhan oo ahayd Fundraising ayey Golaha Ardaydii iskuulka 26ka Juun ku qabteen Magaalada London
Xaflad ay si balaadhan u soo agaasimeen ardaydii wax ka baranjirtay dugsiga sare ee 26ka Juune ee Hargeysa sanadahii sideetamaadkii ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London Habeenkii Sabtida ee 8th July 2017. Sanadkii hore dhexdisiii ayey ahayd markii magaalada London lagaga dhawaaqay urur ay ku bahoobeen dhamaan aradaydii iyo macalimiintii dugsigaasi oo loo bixiy Golaha Ardaydii Iskuulka 26ka Juun. Ururkani ayaa ah mid aan UK oo keliya ku koobnayn ee waxa xubno ka ah ardaydii dugsigaasi dhigan jirtay ee kala joogta daafaha kala duwan ee dunida sida Yurup, Afrika, Marykan iyo Carabaha. Golahan Ardaydii iskuulkaasi ayaa ujeedad uGu balaadhan ee loo aasaasay tahay sidii ardaydii wax ka soo bartay dugsigaasi ay wax ugu celinlahaayeen oo ay taakule dhaqaale iyo mid farasamaba ay ka geysanlaaheen, iyagoo markii u horeysayba dayactir balaadhan ku sameeyay dhismaha iskuulka oo fasalo badan la dhigay marmarka dhulka, wixii jiingadahu ka xumaayeena jiingado cusub la saaray, lana rinjiyeeyay, waxayna sidoo kale ugu deeqeen buugaag. qorasha dhow ee golahanina uu yahay sidii iskuulka loogu samaynlahaa qayb IT ah oo casriya iyo weliba qaybt laababka ama shaybaadhyada ay ardaydu wax ku baran karto.
Xafladan oo qudbado kala duwan ay ka jeediyeen sida Gudoomiyaha Golaha Ardayda Cabdiwahab Xaaji Xasan oo ka hadlay waxqabadka Golahani halkaasi lagu soo bandhigay Fiidyow laga soo duubay iskuulka oo muujinaya waxqaabadkii Golahani ka geystay iskuulka. Waxa iyaguna goobta ka hadlay oo lagu soo maamusay safiirka Somaliland ee UK Ayaan Cashuur iyo Qosolka Safarada Somaliland Mr Boos, Gudoomiyaha TV ga Qaranka ee Yurub Cabdiraxman Maxamed, Cabdiraxaman Qaalib – oo ahaa ardyadii iskuulka imikana ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Waqooyiga magaalada London. Sidoo kale iyaguna waxa ka hadlay Cabdi Cali Mahdi, Maxamed Aaar, Yasimin Dhoolayare iyo Nasra Goodir oo iyaguna ka mid ahaa ardaydii iskulka 26ka Juun. Waxa hadalka Soo gunaanaday Macalinkii ardaydan ee iskuulka 26ka Juun – Macalin Cabdisalaan. Waxa kale oo ka soo qaybgayal arday iyo dadweyne kale oo ka kala yimid dhamaaan gobolada UK iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub.
Xafladan oo iskugu jirtay Casho iyo madadalo, oo ahayd mid dhaqaalaha ka soo baxa loogu talogalay in lagu taageero iskuulka 26ka Juun waxa heeso ka qaaday Saynab Ciga, Yusuf Dheer, Xasan Beyle iyo siciid xuseen (Siciid dhagax).
Waxa kale oo goobtaasi lagu daawaday fiidyoow laga soo duubay Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo booqday iskuulka isla markuu hargeysa tegayba isagoo kulan uu la yeeshay golahani 30kii bishii Juun uu balanqaaday inuu indhahiisa ku soo arkidoono iskuulka 26ka Juune iyo waxqabadkii golahaniba isla markaasina uu balanqaaday inuu gacan ka geysandoono sidii loo hormarinlahaa iskuulkan. Halkan hoose ka daawo booqashadii Prof. Samatar
Dhinaca kale isla goobtii xafladu ka socotay waxa buugaag ay ugu deeqday iskuulka 26ka Juun keentay gabadh u dhalatay dalka Jibouti. Waxa madashan si habsami leh u daadihinayey Maxamed Yusuf Cilmi – Shaxaari oo ka mid ahaa ardaydii iskuulka 26ka Juun.
Heestii Furitaanka Xaflada waxa qaaday arday ka mid ahaa ardaydii iskuulka 26k Juun